Nzira yekugadzirisa sei kukwenya dambudziko rePVC epurasitiki pasi?
PVC yepurasitiki yepasi irudzi rutsva rwechiedza-huremu hwepasi hwekushongedza zvinhu izvo zvinozivikanwa kwazvo pasirese nhasi, inozivikanwa se "light-uremu pasi zvinhu". Yakave ichizivikanwa pese pese mumaguta makuru uye epakati nepakati muChina uye inoshandiswa zvakanyanya. PVC epurasitiki uriri Ha ...
Chengetedzo yekuchengetedza kubwinya kwePVC epurasitiki pasi
PVC yepurasitiki yepasi pevhu inoshandiswa zvakanyanya munzvimbo dzekutengesa uye dzekugara, izvo zvinowedzera chikamu chezviitiko uye nzvimbo yekuumbwa Nekudaro, kana iwe uchida kuchengeta iyo yakasununguka pasi yakajeka uye yakanaka kwenguva yakareba, iwe unofanirwa kuita izvi zvinhu mukuita kwekushandisa. Zvichengete zvakachena Usashandise cleanin ...
Ndeipi PVC pasi ine yakanyanya abrasion kuramba?
Nezve iko kupfeka kusagadzikana kwePV flooring, yakagara iri imwe yezvinhu zvakakosha izvo vatengi vanoteerera. Iko kusakara kuramba kwePVF flooring kwakanangana neayo pachayo. PVC pasi inowanzo kuve yakakamurwa kuita matatu marudzi: compact pasi, furo pasi uye yakafanana uye transpar ...
PVC pasi pechivara chinowirirana hunyanzvi hwemisha yekuchengetedza
ne admin pane 2021-03-22
Vakwegura iboka rinotambura munzanga, uye kushongedzwa kwekugara kwavo kunofanirwa kuchinjika kune epanyama uye epfungwa maficha evakwegura kuti vagadzire yakasununguka, yakanaka, yakapusa uye yakapusa nharaunda yekugara ine yakasarudzika yakasarudzika. Uriri akakodzera f ...
Zvinowanzoitika matambudziko ePVC pasi yekuisa!
ne admin pane 2021-03-19
PVC uriri rave chinhu chinozivikanwa chitsva chekuvaka mumusika. Nekudaro, kuvaka zvisina kukodzera panguva yekugadzika kuchave nemhedzisiro huru pane yakazara maitiro. Izvi zvinotevera matambudziko akati wandei anobatsira kuwedzera kushanda kwePVF yako pasi. Hupenyu hwebasa. ...
Chiyero cheEuropean chePVC pasi chakapfupikiswa seEN. Pakutanga yaive muyero wekuyedza wakasainwa nenyika gumi neshanu dzeEuropean Economic Community. Iyi muyero wekuyedza wakakamurwa kuita zvakawanda zvirimo. Pakati pavo, iyo TPMF giredhi yezvakafanana zvigadzirwa zvatinowanzo taura zvinobva kune ...
Iwo matatu akakosha mapoinzi kusiyanisa mhando yehunhu hwakafanana hwePVC pasi
Nei paine mutsauko pahunhu uye mutengo weakafanana vinyl pasi? 1.Weight PVC flooring inonyanya kugadzirwa ne polyvinyl chloride zvinhu, pachave nediki dombo poda (calcium carbonate) zvinhu; zvirimo zveupfu hwebwe zvinokanganisa huremu hwePVC pasi, asi icha ...
Maitiro ekubvisa iyo glue pane iyo PVC plastiki pasi？
Nzira yekubvisa sei glue pasi iyo isina kumbopora kare? Rag: Zviri nani kuchenesa pamberi peglue kuoma uye kusimbiswa. Panguva ino, iyo glue iri mvura. Iyo inocheneswa kwazvo mushure mekuishandisa kana kupukuta nejira, uyezve wopukuta iyo yakasara glue. Doro: Iyo glue pasi ...
Kuisirwa nzira yeanti-static PVC pasi
ne admin pane 2021-01-20
1. Chenesa pasi uye tsvaga wepakati mutsetse: Kutanga, geza iyo slag yepasi, uye wozotsvaga pakati pekamuri netambo yekuyeresa, dhonza iyo yepakati muchinjikwa mutsetse, uye kumbira iwo muchinjikwa mutsetse kuti ugovane zvakaenzana kutenderera. 2. Kuisa ...
Nei homogeneous vinyl pasi inogamuchirwa muchipatara?
1. Kuchengetedza Iyo pasi pePVC inogadzirwa nePV mbishi zvigadzirwa zvemabhodhoro emukaka uye masisitimu ekurapa ekurapa, pasina chero chinhu chine chepfu, "0" formaldehyde. Panguva imwecheteyo, kungave kuri kupupa furo kana mamwe maitiro ePVC yepasi, kusimba kwayo kwakanaka kwazvo, uko kunogona ...
Kuisirwa maitiro eakafanana vinyl pasi
PVC pasi yakajairika kwazvo mune yemazuva ano hofisi yekushongedza, nezvakanaka zvekudzivirira mvura, isina moto, mbeveve, nezvimwe .Matanho ekuisa eiyo PVC pasi panguva yekushongedza ndeaya anotevera. uye unoyera ivhu riri roga. Kana iyo ...
Giqiu homogeneous vinyl pasi matipi ekuchengetedza
Giqiu homogeneous vinyl pasi yakarapwa pasina wakisi. Mushure mekuvaka nekuchenesa kwapera, inogona kushandiswa zvakananga. Pamusoro pekugadziriswa kunodiwa panguva yekushandiswa, homogeneous Inogoneka pasi inofanirwa zvakare kushandiswa mune zvimwe zvidiki zvidiki mukushanda uye hupenyu hwezuva nezuva. Funga ...